Ihe na-ekesa ihe eletriki eletrik, igwe ihe eji eme ihe na-ekpochapụ, Harbor Hopper - GBM
Sistemụ Ọganihu Rock Breaker
Usoro ihe na-ekesa akpa
Igwe ihe na-ebu Rotary&nloader akụrụngwa
Mgbasa ọkara akpaaka
Mgbasa ọkụ eletrik
Electro-hydraulic telescopic mgbasa ozi
Mgbasa pụrụ iche
Electro-Hydraulic Orange Peel Jide
Electro-Hydraulic Clamshell jidere
Jidere njikwa anya ikuku ikuku
Nnukwu Cargo Hopper usoro
Ụdị hopper nwere ike ibugharị
Ụdị ihe mkpuchi uzuzu
Igwe akpa akpa
Knuckle boom oche crane
Idozi Ọganihu Crane
Stiff ọganihu mmiri kreenu
Onye njikwa ihe
Crawler hydraulic ihe njikwa
Ụdị ihe eji emepụta hydraulic emebere
Ụdị taya hydraulic ihe njikwa ihe
Anyị na-GBM.We chepụta, rụpụta na ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri equiment na omenala ebuli ngwá maka loading & ebutu.Anyị na-enye ngwugwu niile n'okpuru ihe ịchọrọ.
Anyị factory gafere ISO9001 mba àgwà management usoro, ngwaahịa mmepụta usoro nwere elu na zuru okè nhazi technology, si ígwè pretreatment, blanking, ịgbado ọkụ, ka mgbakọ, okpomọkụ ọgwụgwọ, agba mkpuchi The dum ngwaahịa mmepụta usoro nwere siri ike usoro chọrọ na àgwà ụkpụrụ iji hụ na. mmepụta ngwaahịa.Akụkụ niile nke usoro ahụ na-egbo mkpa usoro na ụkpụrụ dị elu.
Isi na obodo ukwu nke Shanghai, GBM na-eji Shanghai emepe emepe akụ na ụba, ego, omenala, nkà na ụzụ, ozi, njem na ihe ndị ọzọ, na bụkwa akara nke "àgwà" ika.GBM nwere mmekorita miri emi na nnukwu ụlọ akụ anọ iji kwado ụzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche maka ọrụ ndị ahịa.Ugbu a na-arụ ọrụ dị mkpa dị ka àkwà mmiri iji zụlite azụmahịa mba ụwa na ngwaahịa mbupụ gburugburu ụwa.
Site na uto nke ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-abawanye ụba nke ahịrị ngwaahịa, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ anyị na-etokwa.Iji na-ejere ndị ahịa anyị ozi nke ọma, GBM na-aga n'ihu "Q&A teknụzụ" na "atụmatụ mbipụta" nke ahịa, na "nleba anya nke ọma", "ịkwado na ntinye" nke mmepụta, "ndocking ego" na "akwụkwọ mbupu" nke nnyefe, na ikpeazụ "nwụnye otu" "Mgbe-sales ngalaba" nke nnabata.Ngalaba niile emebere ga-ejere ndị ahịa ozi nke ọma.
Njiri mara anyị
Nhọrọ gị nwere nnukwu nsonaazụ maka nrụpụta ọdụ ụgbọ mmiri gị.Nke a bụ ya mere anyị ji nwee iwu ọla edo anyị: emebila ịdị mma & teknụzụ ọhụrụ na njirimara pụrụ iche.
Ngwọta nbudata: Jide+ Hopper + Belt Conveyor Sistemu
Ngwọta nbudata: Crane Harbor + Spreader
Ngwọta akpa: Jide + Igwe akpa
Ngwọta na-ebunye: Ihe na-ebu ụgbọ mmiri
Ihe gbasara Us
GBM bụ Onye na-enye Ngwọta Ngwọta agbakwunyere na Port & Cement Extended Industry, nke nwere isi teknụzụ nke ya yana ilekwasị anya na mmepụta ọhụrụ.
Dabere na ọkachamara GBM na ntozu teknụzụ, anyị na-enye ngwọta zuru oke maka njikwa na nchekwa nke ọdụ ụgbọ mmiri buru ibu, site na imewe, ọkọnọ na ọrụ teknụzụ na-esote nke cranes, hoppers, grab, conveyors, igwe akpa na ngwọta dị ọnụ ahịa na obere ọkwa. .
Site ọtụtụ imekọ ihe ọnụ ahụmahụ na Chinese imewe institute, na integrating na classifying elu-edu ọkọnọ usoro.GBM agbakwasiri ike n'ọdụ ụgbọ mmiri nke mkpokọta atụmatụ;imewe ihu n'ihu;ihe owuwu; ihe eji eme ihe maka onye ọ bụla n'ime ndị ahịa anyị bara uru.
Ọrụ “Otu-Nkwụsị” anyị bụ iji zute ihe ndị ahịa chọrọ n'obere ọnụ ahịa.
Enwere otu okwu na-ejide usoro anyị, site na nro ruo n'ịnye ọrụ: nkeonwe.Nzọụkwụ mbụ anyị bụ nyocha nke ọma nke mkpa na ọchịchọ gị. Mgbe ahụ, anyị ga-agbalị ike anyị niile iji nye ngwọta maka gị.
Na mgbakwunye na ngwaahịa dị elu, GBM na-enye ọrụ nlekọta zuru ụwa ọnụ nke ọnwa 24 n'efu & Ndị injinia na-arụ ọrụ na mba ọzọ. Nke ahụ pụtara na anyị na-ahapụ gị ka ị rụọ ọrụ nke ọma na nke ọma - ọbụlagodi n'ọnọdụ dị oke egwu.
4T @ 30M Crane ntinye na Dubai
50cbm Eco hopper na Gambia
30CBM Eco hopper na ORO simenti
Mgbasa hydraulic zuru oke na Dubai
Ekwentị: 0086 18221720746
Adreesị: SHANGHAI GUANBO MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD
© Nwebiisinka - 2018-2021: Ikike niile echekwabara.
Marine Davit Crane maka ọrịre, Ihe ngbasa akpaaka, Cyclone Dust Proof Hopper, Ejidere mpe mpe akwa oroma, Ihe na-ekesa hydraulic, Spreader Beamlogistics, Ngwaahịa niile